२०७५ असार २५, सोमबार
सगरमाथा आरोहण एउटा सपनामात्रै नभएर मेरो जीवनको लक्ष्य हो । यो सपना साकार भएसँगै आम नेपाली नारीहरुको विरताको कथा थप नयाँ उचाईमा कोरिएको छ । यसको श्रेया तपाई सम्पूर्णमा नै जान्छ ।
सगरमाथा आरोहण आफैमा चुनौतिपूर्ण विषय हो । सगरमाथाको आरोहणको अभियान शुरुवातसँगै थपिने चुनौतीहरुले थप पाठहरु सिकाएको छ । यो अभियानका क्रममा मैले भोगेको कथाहरु अनगिन्ती छन् । त्यो अहिले शब्दमा व्यक्त गरेर समय कम हुन्छ ।
विशेष गरी मेरो सगरमाथा यात्रा योजनाबद्ध हैन । म वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा पाँच बर्षसम्म कोरिया बसेर भखरै नेपाल फर्केकी हुँ । सगरमाथा आरोहण अठोटसँग देशप्रेम, सद्भावलाई जोडिएको छ । म कोरियामा हुँदा नेपाल, सगरमाथा र बुद्धको बारेमा धेरै कुराहरु सुनेँ । नेपाल कुन देशमा पर्छ ? सगरमाथा चीनमा पर्छ? बुद्ध भारतमा जन्मिएको हो ? यी यावत प्रश्नहरुको सामना गर्नु परेको अवस्थाले मलाई सगरमाथा आरोहण अभियानमा सामेल हुन वाध्य तुल्यायो । यस क्रममा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो र सगरमाथा शिखर नेपालमा पर्छ भन्ने सन्देश विश्वसामु दिनका लागि मेरो अभियान सञ्चालन भयो र त्यो सफल भएको छ । यो अकल्पनीय परिघटनाबाट अझ थप उचाईहरु हासिल गर्न मलाई साहस मिलेको छ ।
सगरमाथा आरोहण अहिलेको समयमा नौलो विषय रहेन । सगरमाथा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले आफ्नै तवरले आरोहण गरेका छन् । तर, सबैको पहिचान दिने सगरमाथा सम्वन्धि गलत प्रचार, अनावश्यक भ्रमहरु फैलाउने पाटो कुनैपनि हिसावमा सकारात्मक पक्ष हैन । अर्को तर्फ सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोर र यसप्रति राज्य वेखबर जस्तै भएर बस्नुले पनि सगरमाथाको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्हहरु उठिरहेको छ । आगामी दिनमा सगरमाथा क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर र दुषित मनहरुलाई सफा गरेर सगरमाथा हाम्रो शिर, गौरवको रुपमा युगौंयुगसम्म नाम चम्काइ राख्ने हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ ।
सगरमाथा आरोहण अभियानसँगै हामीमा विदेश पलायनको ठाडो आरोपहरु लागि रहेको छ । शिखरको सफलतासँगै हामीले नेपालको आर्थिक समृद्धी, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने र भूमिकाहरु निर्वाह गर्नुतर्फ ध्यान केन्द्रीय गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु । सामाजिक, आर्थिक रुपमा सम्पन्नता तिर उन्मूख नेपाललाई साहसिक पर्यटन मार्फत अझ नाम चम्काउने र उँचो बनाउन आम आरोहीहरुको तर्फबाट भूमिका खेल्ने समेत दृद्धता व्यक्त गर्दछु ।
मन्त्री गुरुङले गरे ‘कुन्तादेवीमा ५ घर शिलान्यास’